Ole Gunnar Solskjær oo war aan fiicneyn u sheegay taageerayaasha Man United kahor kulanka Manchester derby – Gool FM
(Manchester) 06 Dis 2019. Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu shaaca ka qaaday kahor kulanka habeen dambe Manchester derby ee horyaalka Premier League in laacibka khadka dhexe reer France ee Paul Pogba uu ka sii maqnaan doono safka Man United.
Red Devils ayaa habeen dambe marti ugu noqon doonto Etihad Stadium kooxda Manchester City, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 16-aad ee horyaalka Premier League.
Haddaba tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa sida caadiga ah wuxuu kasoo hor muuqday shir jaraa’id kahor kulankan, wuxuuna si rasmi ah shaaca kaga qaaday in Paul Pogba uu seegayo ciyaarta ka dhici doonto Etihad Stadium.
Waxaa intaas sii dheer inuu jiro shaki laga qabo ka qeyb galka weeraryahanka heerka caalami ee reer France Anthony Martial ciyaarta ka dhici doonto habeen dambe Etihad Stadium ee Manchester derby.
Labadan xiddig ayaa waxay seegeen kulankii Tottenham Hotspur, laakiin Marcus Rashford ayaa dhabarka u ritay mas’uuliyada wuxuuna kooxdiisa ku hoggaamiyay in Spurs-ka ay guul muhiim ah kaga gaaraan 2-1.